Taa na akụkọ ihe mere eme: 1 November 1924 Mustafa Kemal Pasha n'okwu mmeghe nke Nnukwu Mgbakọ Mba nke Turkey | RayHaber
[12 / 12 / 2019] Ihe oru ngo Canal Istanbul	34 Istanbul
HomeGeneralTaa na akụkọ ihe mere eme: 1 November 1924 Mustafa Kemal Pasha n'okwu mmeghe nke Nnukwu Mgbakọ Mba nke Turkey
01 / 11 / 2019 General, Turkey, Taa na akụkọ ihe mere eme
ubochi taa november tbmm acis speech mustafa kemal pasa
1 November 1899 Arifiye-Adapazarı alaka ụlọ ọrụ (8,5 kilomita) meghere.
1 November 1922 Aydın Line zigara ụlọ ọrụ Britain site na arịrịọ nke ndị ọrụ ụlọ ọrụ. Ndị ọrụ Turkish rụgidere ọrụ. Mgbe Mudanya Armistice, ndị isi ụlọ ọrụ nke National Assembly nke Turkey malitere ịmalite njem ụgbọ okporo ígwè nke ndị mba ọzọ. E zigara Izmir-Town Line na ụlọ ọrụ France.
1 November 1924 N'okwu mmepe ya na Mpaghara Ukwu National Turkey, Mustafa Kemal Pasha kwuru, ihtiyacı Ọ dị mkpa maka okporo ụzọ na ụzọ na-eme onwe ya ka ọ dị na mmalite nke mkpa nile nke mba a. Ọ gaghị ekwe omume ịgbasa usoro mmepeanya ugbu a site na ndị ọzọ okporo ụzọ ruo ugbu a. Ụgbọ okporo ụzọ bụ ụzọ nke obi ụtọ ..
1 November 1935 Atatürk kwuru na okwu mmeghe nke Obodo Ukwu Obodo Turkey: "Isi ihe dị mkpa nke ógbè ndị dị n'ebe ọwụwa anyanwụ ga-ejikọta na mpaghara etiti ọdịda anyanwụ na mpaghara ọdịda anyanwụ nke ụgbọ okporo ígwè".
1 November 1936 Yazihan-Hekimhan (38 km) na ụlọ ọrụ Simeryol Construction Company (69 km).
1 November 1955 Eskişehir Ụlọ Akwụkwọ Ọzụzụ Ọhụụ meghere.
Taa na Akụkọ ihe mere eme: 3 Eprel 1922 Mustafa Kemal Pasha,…
Taa na History: 3 April 1922 Mustafa Kemal Pasha
Taa na akụkọ ihe mere eme: 22 April 1924 Congress's 506 law law ...
Taa na akụkọ ihe mere eme: 22 April 1924 Congress's 506 No.
Mustafa Kemal Beach Boulevard na ọrịa na-adịghị agwụ agwụ
Taa na Akụkọ ihe mere eme: 22 November 1922 Ismet na Lausanne…
Taa na History: 14 November 1925 na İsmet Pasha cabinet ...
Taa na Akụkọ ihe mere eme: 13 December 1939 Railway na Erzurum
Ihe oru ngo Canal Istanbul